RIYAHA SAANEN: SHARAXAAD KA BIXIDA TARANKA IYO DAYACTIRKA, QUUDINTA IYO DARYEELKA XAYAWAANKA CAANAHA LO'DA - RIYAHA XOOLAHA
Wakiilka ugu qiimaha badan ee riyaha ah ee caanaha sarreeya waa Swiss Zaanen, oo ah goobta uu ku yaal magaalada Zaanen, oo ku yaal Alps. Xayawaanku way ka duwan tahay riyaha kale iyada oo waxtarkeedu sarreeyo, bacriminta wanaagsan iyo u-habboonaanta xaaladaha cimilada adag. Si kastaba ha noqotee, kuwa raba inay koraan waa inay yaqaanaan xeerarka iyo sifooyinka ay ka kooban tahay.
Riyaha Saanen: sharaxaadda taranka
Maanta, riyaha cadaanka ah ee Switzerland ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu fiican. Macluumaadka ku saabsan asalka dhabta ah ee caansaankan ma aha, laakiin cilmi-baarayaashu waxay ku qancinayaan ikhtiyaarka "xulashada qaranka". Markii ugu horreysay, riyaha ayaa la arkay dhammaadkii qarnigii 19aad isla markiiba waxaa loo yaqaanaa dhulka Maraykanka, Australia, iyo wadamada yurub.
Ma taqaanaa? In Dawladihii hore ee Midowga Soofiyeeti, xayawaanka waxaa la soo saaray 1905. Waa arrin muhiim ah, laakiin dal kasta wuxuu siiyay riyaha magaciisa, tusaale ahaan: Jarmal ah cadaan ah oo la hagaajiyay, American Zaanenskie, Nederland, cad cad, iwm.
Ariga zaanenska ayaa ah xayawaan aad u xoog badan, oo leh dhererkiisu sarreeya, oo dhererkiisu yahay hal mitir, oo culeyskiisu wuxuu noqon karaa ilaa 100 kg, iyo dumarka ilaa 90 kg. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha badankood, miisaanka nool waa 55 kg riyaha, iyo ilaa 80 kg riyaha.
Zaanenka wuxuu leeyahay midab cad oo cad oo leh timo dhalaalaya oo caarad leh oo dhererkiisu yar yahay. Nooc adag oo xoog leh, qalfoofyo si fiican u horumarsan oo lugaha toosan leh ee hooves, rinji oo jaalaha ah.
Madaxa waa weyn, oo leh muuqaal qurux badan, "wax murugo leh", qoortu waa mid wakhti dheer iyo dheerba, xajmigu waa mid dheer, oo leh maqaar ballaadhan iyo dhegaha dhegta. Dhegaha dhegta waa qalad waxaana loo arkaa cillad. Dhamaan ragga waxay leeyihiin gadhadh ballaaran, iyadoo ay haweenku ku dhowdahay mid aan la arki karin ama gebi ahaanba maqan.
Muujinta gaarka ah ee zaanenka waa weyn, candhuufta jilicsan ee jilicsan oo leh jilbaha si fiican u horumarsan oo tilmaamaya. On dusha sare ee candho xoolo ah, wakiilada qaar ka mid ah noocyada leh lebbooyin madow badan, tani ma aha cilad.
Ka fiiri nuuca ugu fiican ee ariga, riyaha Lamanchi, Alpine, Boer, Nubian.
Iyadoo wax soo saar, riyaha waa kuwa ugu qanisan. Heerka dhalidda caanuhu waxay ku xiran tahay xaaladaha xoolaha iyo cuntada. Haddii aan tixgelinno shuruudaha gobolka, ka dibna waxaa la siin doonaa qiyaastii 600-750 litir oo caano ah sanadkiiba, iyada oo xaaladaha ku habboon lagu ilaalinayo, tiradaasi waxay u dhigantaa 1,300 litir.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha laga helay caanaha rikoodhka ayaa laga diiwaan geliyey waddanka riyaha, waxayna ahayd 2499 litir oo caano ah sannadkii.
Zaanenki waxaa lagu qiimeeyaa soosaarkooda sarreeya, waxtarkeeda wuxuu kordhiyaa tirada lambarka. Saamaynta ugu badan ee caleemaha caanuhu waxay timaaddaa dhalashada afraad, kadibna haweenku waxay siin kartaa 8-12 litir oo caano ah maalintii, subaxda iyo fiidka.
Inta lagu jiro nuujinta, caanaha caanuhu waxay ka badan karaan culeyska xayawaanka laftooda 20-25 jeer. Marka la barbardhigo, ee lo'da, isku dheelitirkaan kama badna sideed. Qaangaadhka jinsiga ee haweenka ayaa yimaada 8-10 bilood. Muddada uurku wuxuu soconayaa ilaa 11 bilood. Outrigger ka mid ah boqol riyo ah - 180-250 kids, waxaa loo arkaa tiro ku filan.
Caano ari waa mid dhadhan fiican leh, dufan dhexdhexaad ah - ilaa 4%, oo qaro weyn leh, dhadhan jilicsan oo jilicsan, iyada oo aan la helin urin qaas ah, taas oo ka dhalatay alaabooyinka noocyada kale.
Xayawaanka riyaha cadaanku waxay calaamad u yihiin faa'iidooyin badan oo aan shaki ku jirin oo ka soocaya dhinaca wanaagsan.
Waxsoosaar fiican. Xitaa kadib guurka ugu horeeya, haweenku waxay awoodaan in ay soo saaraan ugu yaraan kala badh oo caano ah sannadkii, iyo ka dib laadiga afaraad, soosaarka caanuhu wuxuu laban laaban karaa;
muddada dheer ee nuujintaoo soconaya 10-11 bilood;
dhalmo fiican. Waxaa jira ilaa 250 madax oo ah dhalo yar yar boqolkiiba boqol. Intaa waxaa dheer, riyaha si dhakhso ah u kora, iyo, natiijada, si dhakhso ah u siiyo farcankiisa soo socda;
dhadhanka caanaha. Caanaha rooggu waa shey gaar ah iyo, sababtoo ah urta "dabiiciga" dabeecadda, badanaa kuma dhadhamin sida dadka waaweyn ama carruurta. Caanaha riyaha ah ee noocaan ah ma laha cilladahaas, waxay urineysaa weyn waxayna leedahay dhadhan fiican;
caano dufan badan - ilaa 4%, halka lo'da - ugu badnaan ilaa 3.2%;
Fursadaha lagu cuno hilibka xayawaanka yaryar 3 ilaa 5 bilood, ka dib markii ay joojiyaan kobcintooda xooggan;
La qabsashada aadka u fiican ee xaaladaha cimilada adag;
fursado ah in la daajiyo xayawaanka meelo aan geli karin lo'da, tusaale ahaan, goobaha buuraha, dooxooyinka.
Dhibaatada ugu weyn ee laga qabo taranka ayaa loo tixgeliyaa inay tahay dalab sare oo ku saabsan xaaladaha xabsiyada iyo daryeelka joogtada ah. Joojinta nafaqada, heerkulka, qallajinta qolka waxay keenaysaa xaqiiqda ah in wax soo saarista riyaha ay hoos u dhacdo. Sidoo kale, qaar ka mid ah jilciyeyaasha in yar-yar ee taranka darajo darajo weyn, mararka qaarkood xitaa cabsi cabir ah ee riyaha.
Marka aad soo iibsanayso saamiyada dhalinyarada ee waddankeena, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaatada la'aanta shakhsiyaadka diyaarka ah ee leh buugaagta xajmiga ah. Waxaa laga iibsan karaa oo kaliya qaar ka mid ah jilayaasha, iyo kharash aad u sarreeya.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid wax ku ool ah inaad wax ka barato sifooyinka lambarka riyaha, ee ku saabsan cudurrada ugu weyn ee riyaha, oo ku saabsan sifooyinka doorashada ee riyaha, sida loo dhiso roodhida riyaha, imisa litir oo caano ah ayaa riqsiyo siinaya, sida loo doorto mashiinka caanaha riyaha.
Saanenka ayaa aad u rabta mawduuceeda, xaaladaha xunna waxay si xun u saameeyeen waxsoosaarkooda.
Shuruudaha ugu muhiimsan ee ay ku qoran yihiin waa:
Microclimate qolka. Xayawaanka si siman u dulqaadan karaan kulaylka iyo qabow. Xilliga jiilaalka, heerkulka qolka waa inuusan hoos u dhicin +7 digrii, xagaaga waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in calaamaduhu aanu ka sarreeynin + 19 digrii. Riyaha ayaa si xun ugu jawaabaya qoyaan badan, waxaa muhiim ah in aysan ka badneyn 75%.
Hawada cusub. Meelaha ay xayawaanka ku nool yihiin, daryeelka waa in loo qaado si loo sameeyo hawo hawo oo ku filan, laakiin isla markaasna hubi in aysan jirin wax qorshe ah.
Nadiif Dalabaadka sare waxaa lagu dhigaa nadaafadda qolka. Riyaha waa in la nadiifiyaa, isla markaana qashin-qubka waa in la badalo isla markiiba ka dib markii uu sumoobay. Xasilinta waxaa laga dhisay mooska, barkadaha qashinka ah ama kaydka. Waxaa lagu talinayaa labada dhinac in ay u sameeyaan qaboojin loogu talagalay in laga saaro alaabada qashinka ah ee xayawaanka. Sanadkiiba laba jeer waxay jeermiska ka dhigaan sariirta.
Intaa waxaa dheer, riyaha caanaha waa in lagu hayaa qolal gaar ah illaa laba mitir oo laba jibbaaran. m, laba dumar ah. Riyaha waxay u baahan yihiin inay abaabulaan meelo badan.
Daryeel iyo nafaqo
Cuntada ariga cad ayaa u qalantaa dareen gaar ah maxaa yeelay waxay ka duwan tahay alaabta ay u baahan tahay nuucyada joogtada ah.
Qaybaha waajibka ah ee xayawaanka xooluhu waa inay ahaadaan:
cusbo. Waa in si joogto ah loo siiyaa;
cows-siriyaalka. Riyaha raaxo la'aanta ah ayaa isticmaala cagaarka noocyada kala duwan ee cawska waxayna doorbidaan dalag ama miraha beeraha;
silo Ku haboon tahay quudinta xilliga jiilaalka;
fitamiino iyo macdanta oo ku salaysan dabacasaha, tufaaxa, baradhada, xididdo, kaabajka.
Ogow waxa roodhada cunta, sida loo quudiyo ariga caanaha, sida roodhida riyaha qabta.
Xilliga jiilaalka, khabiiradu waxay kugula talinayaan "xayawaanka" xayawaanka leh nalalka lime ama caleemaha qorraxda, saqafyada yar yar.
Waa muhiim! Ha ku quudin riyaha qashinka cuntada ee ka yimaada cuntada qofka. Tani waxay saamayn kartaa, marka hore, mugga dhalidda caanaha, iyo marka labaad, waxay wiiqi kartaa caafimaadka.
Waa lagama maarmaan in xoolaha lagu quudiyo biyo kulul ilaa laba jeer maalintii, taas oo ku xidhan heerkulka hawada.
Wax yar maaha muhiimadda daryeelka xayawaanka ee xayawaanka, gaar ahaan, dhogorta.
Si aad uhesho jaakad jilicsan, iftiin leh oo caafimaad leh, xayawaanku waa inuu si joogto ah u socdaa:
xagaaga - ugu yaraan 5 saacadood maalintii;
xilliga qaboobaha - ilaa 2 saacadood.
Sanadkiiba laba jeer waxaad u baahan tahay inaad sameysid habraaca lagu xoqayo qashinka. Socodka ayaa ka horjeeda baraf xoog badan, heerkulka subaxo iyo kuleylka muhiimka ah.
Riyaha Zaanenskoe, oo dhan, waxay ka qiimo weyn yihiin marka la eego waxsoosaarka sare. Si aad u hesho riyaha iyo riyaha yar yar waa inay noqdaan kuwa laga xaqiijiyay, loona yiqiin jilicsanaan.
Si aad u hesho farac wanaagsan, waxaad u baahan tahay riyaha daahirsan, oo leh dhisme xoog leh iyo caafimaad wanaagsan, kuwaas oo bacrimiya ilaa konton dheddig. Ka hor intaadan mareeynin, waxaa xayawaanku daalaan.
Inta lagu jiro hal maalin, ariga ayaa "dabooli kara" illaa saddex dumar ah, iyo mudada u dhaxaysa labada nooc waa inay ahaadaan ugu yaraan 4 saacadood. Haddii ayan jirin riyo weyn oo beerta, waxaa lagu badelaa ari yar, laakiin aan ka yareyn 8 bilood.
Waa muhiim! Waxyaabaha ugu wax soo saarka ah waa da'da roodhiga 2 ilaa 5 sano. Dumarka da'yarta ah iyo riyaha hore waxay u oggolaadaan soo-saaraha dhex-dhexaadka. Laakiin dumarka dhexdhexaadka ah waxaad qirsan kartaa riyaha nooc kasta oo da 'walba ah.
Riyaha ayaa noqda galmo jilicsan 6-8 bilood, hase yeeshee waxaa lagula talinayaa in la sameeyo mishiinka aan ka horeyn 1.5 sano. Dumarka ay rabto in ay uur leedahay ayaa lagu go'aamin karaa dhaqankeeda: waxay noqotaa deganaansho la'aan, lumiso rabitaankeeda iyo rabitaanka daalinta, lafa-galkeeda, xubnaha taranku way barbaaraan oo waxay casaanaan casaan yar.
Haddii xaalad aan ku qanacsaneyn baahida jireed ee haweeneyda, jimicsigeeda jinsiga ayaa la soo celin doonaa dhowr toddobaad kadib.
Zaanenki uurku wuxuu socdaa qiyaastii 6 bilood. Wixii lambarkan soo socda, waa inaad diyaarisaa qolka jilicsan ee aan lahayn qulqulka, kaas oo derbiyada laga dhufto oo gogol cusub lagu rakibo. Nidaamka dhalashada carruurta ee xayawaan caafimaad leh ayaa la qaadaa iyada oo aan waxqabadyo aadane ah, qiyaastii 40-50 daqiiqo.
15 daqiiqo ka dib dhalashada ilmo yar, mid labaad ayaa dhasha. Wiilasha miisaankoodu waa celcelis ahaan 4.5 kg, gabdhaha - illaa 3 kg. Dhallaanka cusub, xudunta xundhurta ayaa si taxadar leh looga gooyaa fogaan ah 8 cm caloosha, xalka gaarka ah ee indhaha, afka iyo sanka ayaa ka saaraya xab.
Ma taqaanaa? In ka badan 80% riyaha ariga waxay u dhalaan mataano.
Halkee laga iibsadaa ariga zaanensky
Maanta waa arrin aad u adag in lagu iibsado riyaha daahirsan ee dalkeenna. Doorashada ugu fiican waa inay ka soo iibsato dhirta taranka. Si kastaba ha noqotee, dad badan oo doonaya doorashadan lama heli karo.
Waxaad dooran kartaa xayawaan ka yimid beeralayda gaarka loo leeyahay, laakiin taa darteed waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto dhowr arrimood:
dhogor cad oo cad. Joogitaanka dhibco ama midabyo kala duwan oo dhogor ah ayaa tilmaamaya in uu jiro iligii yaraa ee horteed. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad dareenka ka qaadatid gobolka ee jaakadda - waa inay noqotaa mid gaaban, mid sahlan oo iftiin leh;
toosan lafdhabarta. Dhaqan, dib u laabo maaha mid ka mid ah jilitaanka Zaanen, iyo waqti ka dibna xitaa ma bixi doono, sida iibsadaha aan daacad ahayn sheegan;
dhererka qulqulka - aan ka yarayn 75 cm. Koritaanka hoose ee xayawaan weyn ayaa laga yaabaa inay tilmaamaan inta lagu jiro beerashadooda tiknoolajiyada muhiimka ah looma ixtiraamo. Xaqiiqadani micnaheedu maaha in isbedelka uu isbeddelay, kaliya rajo beel caano wanaagsan oo xaaladaha noocaas ahi aysan u qalmin;
wax ur ah caanaha caanaha. Caanaha Zaanenki ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay ur wacan. Joogitaanka "riyaha" hooska - natiijada daryeel xumo, gaar ahaan, waxyaabaha ku jira mid ka mid ah riyaha iyo riyaha, sababtoo ah ugu dambeyntii waa ilaha urta aan fiicneyn.
Sidoo kale, khabiiro ma talinayaan in ay iibsadaan riyaha ka dib lambarka afaraad, maadaama ay wax soo saarkoodu hoos u dhaco.
Dhab ahaantii, waxaa suurtogal ah in la ogaado riyaha caadiga ah ee zaanenka haddii ay jirto ugu yaraan khibrad xoolo yar. Sidaa darteed, haddii aadan haysan mid, adeegso xirfadle.
Riyaha Zaanensky waa xayawaan aad u fiican oo ku farxi doona wax soo saar leh, bacriminta wanaagsan iyo caanaha caafimaadka leh, caanaha caafimaadka leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay u mahadcelinayaan milkiilayaashooda raashin aad u culus oo loogu talagalay daryeel taxaddir leh iyo cunto kala duwan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Riyaha xoolaha 2019